Yenza ii-invoyisi zobungcali nge-Invoice Mate ye-Mac, yasimahla okwexeshana | Ndisuka mac
Ngakumbi nangakumbi sibona abasebenza bodwa okanye iinkampani ezincinci ezifumana iikhompyuter zeMac kwiinkqubo zobungcali, kunye nokusebenzisa imveliso kunye nokuphathwa ngokulula kwenkqubo yethu yokusebenza. Bavame ukuba ziingcali ezisebenza kwiiprojekthi kwaye ngenxa yoko azifuni zakhono zolawulo kunye nezokuhlawula ezinokubonelelwa yinkqubo yolawulo lobungcali. Endaweni yoko, bafuna ntoni luthotho lweetemplate ukwenza loo misebenzi iphindaphindwayo, efana noqikelelo, ii-invoyisi, njl.
Kwimeko apho, namhlanje sibonisa iseti yeetemplate ezingama-80 zeLizwi likaMicrosoft, eziya kuthi zisivumele ukuba senze ii-invoice ngenqanaba lomzobo oqhelekile kubungcali obukhulu. Ukuba uyakhawuleza, uya kuyifumana yasimahla okwexeshana.
Nje ukuba sikhuphele usetyenziso kwiVenkile ye-Mac, sijamelene neetemplate ezingama-80 ezahlukeneyo, ukukhetha imodeli elungele umsebenzi wethu. Eyokuqala, eIzinto ekufuneka sizithathele ingqalelo bubuchule bokubandakanya uphawu lwethu. Ngale nto siyaphuma kwizinto eziqhelekileyo kwaye sinikezela ngenkonzo entsha kunye nekhoyo ngoku yeshishini lethu.
Imele i Umsebenzi olula kakhulu. Kulula ukulungiselela i-invoyisi nokuba awunalwazi kakhulu ngayo. Nje ukuba sigcwaliswe, kufuneka siprinte i-invoyisi okanye siyithumele ngqo nge-imeyile.
Isicelo namhlanje simahla. Ukufikelela kwiVenkile yeApple yeMac, ipakethi yethu yeetemplate ezingama-80 izakukhutshelwa kwimizuzwana, kuba ubunzima bayo buhlala kwi-51 Mb kuphela.Ukongeza, ukuba iseti yeetemplate, zihlaziywa rhoqo, into esoloko sixoxa nayo ukuze sazi iqondo lokugcinwa kweapp yethu. Ukuba unomdla kwezi zicelo, cofa apha ngezantsi ukuzikhuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Yenza ii-invoyisi zobungcali nge-Invoice Mate ye-Mac, yasimahla okwexeshana
Molo ndiyifakile inkqubo yedamn, ndiyayivula, kuvela iitemplate, ndicofa kabini kwaye ivule umntu ozifumanayo kwaye yiyo lonto. Akunakwenzeka
Ungandixelela ukuba isebenza njani, nceda?